Kore : fitontongan’ny ekonomia, orinasa iza no manam-bintana indrindra ny ho velona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2009 7:38 GMT
Raha nanantena ny maro amintsika fa hifarana tsy ho ela ny fitontongan'ny ekonomia dia hita fa mbola ady haharitra ela izy ity. Mampihena ny isan'ny mpiasa ny orinasa na mampidina ny vokany. Mizara ny traikefany ny terantany anankiray izay miasa ao amin'ny orinasa Japone. Karazana fandrefesana ara-bola maro no nampidirina..
Miasa ao amin'ny orinasa Japone iray aho. Efa zatra miasa any amin'ny toby fitrandrahana aho ary fito taona lasa izay, dia nifindra nankany amin'ny orinasa Japone iray aho. Orinasa mpaminjara masinina izy ity ary manana ny tahiriny any Tokyo sy Osaka. Izany hoe, orinasa mahazatra mivarotra ny entany amin'ireo mpandraharaha malaza eran-tany. Hitako tao amin'ny gazety sy ny fahitalavitra fa vokatry ny fitontongan'ny ekonomia dia orinasa maro no mapihena ny isan'ny mpiasa ao aminy noho ny fantiantoka. Nandeha tany amin'ny FMI koa aho fony niasa tamin'ny orinasa lehibe iray ary mazava amiko ny fiatrehan'ny orinasa ity olana ity amin'izao fotoana izao. Tamin'izany fotoana izany dia mandeha isan'andro any amin'ny orinasa iray aho ary henoko hoe iza no horoahina, iza no handao ny orinasa, iza no hafindra any amin'ny toeran-kafa… Sarotra tamiko ny nifantoka tamin'ny asako ary misento isan'andro aho.
Ny antony hanoratako androany dia hilazako ny fanantenako rehefa niasa tamin'ny orinasa Japone aho. Rehefa nanaomboka niasa tato aho 7 taona lasa izay dia nidiran'ny fantiantoka ny toeram-piasana ka noho izany dia latsaka ambany ny renivola nampiasaina. Voatery teo anelanelan'ny hoe hijanona sa handao an'i Japon izahay. Sahirana ny rehetra ary nihitsoka ny karama.
Ny tena zavatra nanahirana ahy tamin'ny vao niasa tany voalohany dia ny fahasamihafan'ny kolontsainan'i Kore sy Japon. Na dia firenena mifanakaiky aza izy ireo dia tsy mitovy ny kolontsainy ary tsy azoko ny ankamaroany. Noho izany dia nanomboka namaky boky mikasika an'i Japon aho, kanefa tsy nahay ihany. Nihevitra ny handao ny asako aho kanefa olona fantatro ilay nanome ahy io asa io. Tsy ho sahiko ny hifanatri-tava aminy raha miala aho ka nanapa-kevitra ny hijanona faran'izay ela azoko atao aho.
Nandritra ny 7 taona tany an-toerana dia sorena ihany aho matetika kanefa niasa mafy. Noho izany nahazo tombony ny orinasa. mazava ho azy fa niasa tsara daholo ireo mpiara-miasa amiko. Fa ny zavatra nahagaga ahy indrindra dia tsy entin'ny orinasa miverina any Japon ny tombony azony fa tehirizina ho tahaka ny ambim-bava. Raha orinasa Koreana izay dia efa nozaraina tamin'ny mpiara-miombon'antoka ny tombony, na hananganana orinasa vaovao, na hividianana fiara be vaovao… Avy amin'ny tombom-barotra notehirizina dia afaka miatrika tsara ny olana izahay. Noho izany di nandidy anay ny lehibe hampiasa io tombony io mandram-pilamin'ny toe-draharaha.
Fantatro fa maro amin'ireo orinasa matanjaka no voatery mampiakatra ny fifanakalozana ara-bola ary ankehitriny aza dia najanona ny hetsika. Raha hampitahaina amin'ny orianasa hafa ny toeram-piasana iasako dia miasa am-pilaminana aho. Ny orinasa Koreana nandany vola be tamin'ny fotoana nahazoany tombony, naka trosa tany amin'ny banky, ary tena natoky ny asany! Mino aho fa zavatra tokony hianarantsika izao.
Mba ho ohatra, tsy olona tia an'i Japon aho… Ny zavatra mazavata aloha dia mino ny nipoirany tsara ny Japone.
Mijery ity lahatsoratra ity dia maneho ny heviny ny maro.
Raha resaka afera, ny fomban'i Kyoto…Amin'izao fotoana izao dia mitovy amin'ny zavatra novakiako tao amin'ny Businness Week androany io. Ny fomban'i Kyoto… Rehefa mahazo tombony ry zareo dia efa miomana hiatrika olana. Misy orinasa misedra ny olana ara-ekonomika any Kyoto, fa ny henoko dia tsy mahatafaverina ny rafitra nisy tao aminy intsony ry zareo. Ny hany voavonjiny dia ampiasaina handoavana ny karaman'ny mpiasa mamndritra ny 2 taona (na dia tsy misy tsena mihitsy aza). Ny orinasa rehetra dia efa manana masoivoho iraisam-pirenena daholo ivelan'ny faritra misy azy. Ny toerana iasanao no toerana azonao itokisana.
Marina fa mikarakara ny nipoiranyry zareo. Raha vao mikitika solosaina isika any am-pianarana dia tsaroantsika fa efa namaky loha tamin'ny kajy an-kandrina isika fahiny. Azontsika hianarana fa ny sekoly rehetra mahakasika orinasa, fambolena ary sehatry ny afera no hikajiana ny fanabeazana fototra.
Vokatry ny tantara taloha dia mamaly ny sasany mora tohina.
Ekeko ny fanasaziana ny Koreana niasa ho an'i Japon tamin'ny fanjanahan-tany. Kanefa heveriko fa tokony hianatra ny fanaovan'i Japon afera isika ary hianatra ny fisainan'ny samoray.
Tsy afeniko fa tsy tia an'i Japon aho, kanefa tokony hahatsapa ny zava-misy isika. Azo antoka fa manaja tsara ny nipoirany izy. Misy zavatra tokony hianarantsika azy.
Toa salama tsara ny orinasa. Kanefa tsy midika izany fa tahaka azy daholo ny orinasa Japone rehetra.[…]
Marina tokoa izany, “tena matoky ny nipoirany” izy. Na izany aza dia misy firenena mihoatra azy. tsy iza izany fa Etazonia. Tiako ny manambara aminareo fa Etazonia dia “natoky ny tenany” talohan'ny nahatokisany ny nipoirany. Amin'ny lafiny iray dia mahay maka tahaka i Kore ary izay no antony tokony hampitombo azy haingana. Raha misedra olana ny tsirairay amin'izo fotoana izao, dia tsy tokony hisy ny fifaninana ary tena vintana be ho antsika ny mieritreritra ny nipoirana ny sy fahatokisan-tena.